I-Ca' San Piero Biennale, ikhaya lakho e-Venice yokwenene. - I-Airbnb
I-Ca' San Piero Biennale, ikhaya lakho e-Venice yokwenene.
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguClaudia
I-Venice yahlulwe yayi-6 Sestieri (iindawo ezikufutshane) kunye nenqaba, yeyona iqaqambileyo. Isetyenziswa zizithuthi zikawonke-wonke, izele ngamatheko nemiboniso, iBiennale kunye neVia Garibaldi ebalulekileyo. Inethiwekhi ye-wifi ehamba phambili iyakhawuleza ukukonekta. ICawa yaseSt. Peter inobukhazikhazi. Kwisithili uza kufumana iivenkile zokutya, iivenkile zokubhaka, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, ii-bacarians eziqhelekileyo zaseVenetian, iiNapoleonic Gardens ezidumileyo kunye nendawo enkulu eluhlaza yaseSant 'Elena. I-Lido kunye nolwandle lwayo ikumgama wemizuzu eyi-10 yokuhamba nge-steamboat.
I-Venice yahlulwe yazinxalenye ezintandathu.
I-Ca' San Piero Biennale ikwisithili saseCastello, eyona ndawo inembali kwaye yahlala eVenice, ikwayindawo enabantu abaninzi negcwele amasiko. I-Via Garibaldi ikumgama wemizuzu eyi-5 kwaye yenye yezona ndawo zihlala kuyo, izele ziindawo eziqhelekileyo ezifana neebacarians kunye neevenkile zesintu ezifana nesikhephe esithengisa iziqhamo nemifuno. I-Venice Biennale ikwisithili, izele ziindawo eziluhlaza kunye neegadi. Le ndawo isebenza ngezithuthi zikawonke-wonke (i-vaporetti) imini nobusuku. Kwi-10' ufikelela kwi-Lido yeemuvi kunye nolwandle.
Mna noodadewethu siyafumaneka kwiindwendwe kuyo nayiphi na inkcazelo.